သင့်ကို ဝစေသော အချက်ရှစ်ရပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သင့်ကို ဝစေသော အချက်ရှစ်ရပ်
Posted by တိမ်မည်း on Oct 26, 2012 in Copy/Paste, Society & Lifestyle | 13 comments
Shared from http://news.yatanarpon.com.mm/news/news-3218
မှတ်သွားပြီ၊ မှတ်သွားပြီ …ကျေးဇူး…ခုတလောဝိတ်တက်နေလို့ စိတ်ညစ်နေတာ ။
အချက် ၈ ကိုဖတ်ရှူရန်………….
ကျန်တာတွေကို နဲနဲသိထားပေမဲ့ အခန်းအပူချိန်တော့အခုမှဘဲသိတော့တယ်..
အဲကွန်းခန်း အအေးကိုပဲ တာဝန်ခံပါသည်……..
မိန်းကလေးမှန်းမသိ ယောကျာင်္းလေးမှန်းမသိ အကြံပေးလိုက်အုံးမယ်……
အိပ်ရင် ကျပ်ထုပ်သော အ၀တ်မ၀တ်ပါနဲ့ ….
ဖြစ်နိုင်ရင် အ၀တ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သို့ မဟုတ် ဂျပန်လို အိပ်ရင် ပိုမို အကျိုးရှိပါသည်…..
အိပ်ခါနီး ရေချိုးခြင်းဟာလည်း ကိုယ်အပူချိန်ကို လျော့ပေးပါသည်…..
ဟတ်ကဲ့၊ နံပတ် ၅ အချက်ကိုလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့
ကိုတိမ်မဲ နဲ့ အပေါင်းအသင်းမလုပ်တော့ပါဝူး။
ကျုပ်က ဘယ်လောက်များဝနေလို့ လဲကွယ်……….
အခုထိ ပုံမှန် အချိုးအစားထဲမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်နော်…….
၁- အရပ်နဲ့လျော်ညီသော ကိုယ်အလေးချိန်အတွင်းရှိ
၂- ဘာအချိုရည်မှ မသောက်ပါ
၃- အကျင့်ဆိုးကို ပြင်နေတုန်းပဲ
၆- နည်းနည်းနဲ့ မကြာခဏစားသည်
၇- ပလတ်စတစ်အသုံးများနဲ့ ပတ်သက်နေရတုန်းပါ
survey လုပ်ပြီးမို့ ပြုပြင်ကြည့်ပါမယ်….ကျေးဇူးပါနော်…
အခုထိတော့ လေ့ကျင့်ခန်းတခုကို တလကျော်အောင် မှန် မှန် မလုပ်သေးဖူးဘူး…..
အဖော်ကို မှီခိုတယ်ဆိုတဲ့ အကျင့်ကမကောင်းပေမယ့်….
တချို့ အကျင့်လေးတွေက အဖော်ရှိရင် တော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်……
ကျွန်တော့် ဆီမှာ အဲ့လို အကျင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့စာပေတွေ မှတ်သားဖူးပေမယ့်…….
အမြဲတမ်း တယောက်တည်း ဖြစ်နေတော့ ဘယ်အကျင့်မှ ကြာကြာမခံဖူး……..
အဲဒီအချက်ရှစ်ချက်ထဲမှာ ၄ ချက်လောက်တူနေတာတောင် ပေါင်က ၁၃၀ မကျော်လာဘူး ဝအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလဲပြောပါအုံး
၈ ၊စိတ်တော့ မဖိစီးပါ။
ကျမလဲ ပေါင် ၁၀၀ မပြည့်ဘူး။
အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးဘူး ပြောခံရမှာကြောက်လို့ ၀ချင်တယ်။
ဘယ်လိုစားစာ မ၀တဲ့သူများလည်း ရှိပါတယ်……….
အဲ့လိုလူမျိုးတွေ အခုထိ သူငယ်ချင်းထဲမှာရှိပါတယ်…………..
သူတို့ မှာ ထူးဆန်းတဲ့ အကျင့်လေးတွေရှိပါတယ်…………
ပီးတော့ လှုပ်ရှားမှူလည်း များပါတယ်…………..
တချို့ တချို့မွေးရာပါ ဘယ်လိုမှ မ၀နိုင်တဲ့သူများတော့ မပြောတက်ပါ………….
နောက်ပီး အမ ပြောတားလေးတွေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်……….
အမမှာ များများအိပ်ဖို့ ပဲလိုတာနေမှာပါ………
ပီးတော့ ထမင်းစားပီးတိုင်း ၁၀ မိနစ်လောက်ကျောချအိပ်တဲ့အကျင့်လေးရှိရင်ပိုကောင်းမယ်…..
ပီးတော့ ပဲဟင်းချို သောက်တဲ့အကျင့်လေးရှိလားဟင်……….
တချို့ မိန်းကလေးတွေက ပိန်လွန်းအားကြီးတော့ ၀ချင်ကြတယ်…..
ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းထဲမှာ ယောကျာင်္းလေး ကော မိန်းကလေးကော ပိန်လွန်းတဲ့သူရှိပါတယ်…..
ပိန်လွန်းသည် ဖြစ်စေ ၀လွန်းတာဖြစ်စေ တခုခုဖြစ်နေရင် သဘာဝနဲ့ လွန်ဆန်တာရှိနေလို့ ပါပဲ………..
အမလည်း ဒီထက် survey ပိုလုပ်ရင် သိလာမယ်ထင်ပါတယ်…….
အန်တီ ရေ စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ အန်တီပဒုမ္မာနောက်မှာရွှေကြည်ရှိတယ် ပေါင် 90 တောင်ပြည့်ပါ့မလားမသိ။
Padonmar … မ ၀ ချင်ပါနဲ့ … ပိန်ချင်တိုင်းပိန်လိူ့မရဘူး … ဒီမှာ ၀လို့ စိတ်ညစ်နေတာ … ::(